Taliska Militariga Soomaaliya oo beeniyay in la boobay dugsigii tababarka ciidamada ee Jen Gordan | Baydhabo Online
Taliska Militariga Soomaaliya oo beeniyay in la boobay dugsigii tababarka ciidamada ee Jen Gordan
Taliska ciidamada militariga dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar saacadihii ugu danbeeyay soo baxayay oo sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya boobeen agabkii yaala dugsiga Jen Gordan oo ay maamulaan Imaaaraadku.
Wararka lagu baahiyay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa lagu sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya dhac iyo boob ka geysteen dugsiga tababarka ciidamada Jen Gordan oo ay baneeyeen saraakiishii Imaaaraadka ee ku tababari jiray ciidamada militariga Soomaaliya.
Taliyaha hogaanka siyaasada iyo wacyi-gelinta ee ciidamada xooga Gaashaanle sare Cabdixamiid Sheekh Cali Xayda oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan jirin eedeeyntaasi, wuxuuna tilmaamay in la baahiyay warar aan sax aheen.
Sarkaal lagu magacaabo Cabdullaahi Cumar Cali oo ka mid ah saraakiisha Milatariga Soomaaliya ee ku sugan xerada Tababarka Dowladda Imaaraadka Ccarabta ay ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in maalintii shalay Saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda boob ka geysteen xerada oo ay ka qateen dhowr gaari oo nuuca dagaalka ah kaddib markii ay xaruntaasi baneeyeen Saraakiisha ka socotay dowladda Imaaraadka ee Tababarka ka bixin jiray magaalada Muqdisho.
Wali ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Imaaraadka oo ka hadlay boobka la sheegay in loo geystay xerada, walow saraakiisha Militariga qaarkood arintaa waxba kama jiraan ku tilmaameen.